Torolàlana ho an'ny famolavolana resaka ho an'ny chatbot anao - Avy amin'ny Landbot | Martech Zone
Chatbots dia manohy miha be pitsiny kokoa ary manome traikefa tsy misy tohiny kokoa ho an'ireo mpitsidika tranonkala noho ny tamin'ny herintaona lasa izay. Famolavolana resaka ivon'ny asa fanaperana chatbot mahomby… ary ny tsy fahombiazana rehetra.
Chatbots dia aparitaka amin'ny alàlan'ny automating fisamborana sy ny fahaiza-mitarika, ny fanohanan'ny mpanjifa ary ny fanontaniana napetraka matetika (FAQs), ny automatisation an-tsambo, ny tolo-kevitry ny vokatra, ny fitantanana ny olombelona ary ny fanangonana, ny fanadihadiana ary ny fanontanina, ny famandrihana ary ny famandrihana.
Ny fanantenana ny mpitsidika ny tranokala dia nitombo izay antenain'izy ireo hahita izay ilainy ary hifandray aminao mora foana na amin'ny orinasanao raha mila fanampiana fanampiny izy ireo. Ny fanamby ho an'ny orinasa maro dia ny isan'ny fifanakalozan-kevitra ilaina hiviliana hahazoana toerana tena misy azy io mazàna dia kely - ka matetika ireo orinasa dia mampiasa forme firaka hanandrana sy hisafidy ireo fotoana heverin'izy ireo fa tsara kokoa ary tsy hiraharaha ireo ambiny.
Ny fiankinan-doha amin'ny endrika fanoratana dia misy fianjerana lehibe tokoa… fotoana fanehoan-kevitra. Raha tsy mamaly ny fangatahana mety rehetra ara-potoana ianao dia very asa. Raha ny marina dia olana amin'ny tranokalako io. Miaraka amin'ireo mpitsidika an'arivony isam-bolana dia tsy zakako ny mamaly ny fanontaniana rehetra - tsy manohana an'izany ny karamako. Mandritra izany fotoana izany, fantatro fa tsy manararaotra ireo fotoana mety hitranga amin'ny alàlan'ny tranonkala aho.
Ny tanjaka sy ny fahalemen'ny Chatbot
Izany no mahatonga ny orinasa mampiditra chatbots. Chatbots dia manana tanjaka sy fahalemena:
Raha sandoka ianao fa olombelona ny chatbot anao dia mety ho hitan'ny mpitsidika anao izany ary tsy hatoky anao intsony ianao. Raha mila ny fanampian'ny bot ianao dia ampahafantaro ny mpitsidika anao fa bot izy ireo.
Sehatra chatbot maro no sarotra ampiasaina. Na dia tsara tarehy aza ny traikefan'ny mpitsidika azy ireo, ny fahaizana manangana botika tena mahasoa dia nofy ratsy. Fantatro… Lehilahy teknika aho izay mandahatra fandaharana ary tsy afaka mamantatra ny sasany amin'ireo rafitra ireo.
Ny hazo fanapahan-kevitra momba ny resaka dia tsy maintsy dinihina tsara sy hohatsaraina mba hanatsarana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny botanao. Tsy ampy ny mamelaka bot miaraka amina fanontaniana vitsivitsy hahafantarana anao - mety hampiasa forme fotsiny ianao, avy eo.
Chatbots dia mila mampiditra fanodinana fiteny voajanahary ambony (NLP) hahafantarana tsara ny mahamaika sy ny fahatsapan'ny mpitsidika anao, raha tsy izany, mahakivy ny valiny ary handroaka ireo mpitsidika.
Ny chatbots dia misy fetra, ary tokony hamindra tsara ny resaka amin'ny olona tena izy ao amin'ny mpiasao rehefa ilaina izany.
Chatbots dia tokony hanome ny varotrao, ny varotrao, na ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa miaraka amina data marobe amin'ny alàlan'ny fampandrenesana sy fampidirana amin'ny CRM na ireo rafitra momba ny tapakila.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny chatbots dia tokony ho mora aminao ny manaparitaka anatiny sy manana traikefa miavaka amin'ny sehatra ivelany. Izay rehetra kely dia ho lavo. Mahavariana…… ny mahomby amin'ny chatbot dia fitsipika mitovy ihany izay mahomby amin'ny resaka fifanakalozan-kevitra eo amin'ny olona roa na mihoatra.
Ny kanto amin'ny famolavolana sy fanatsarana ny fifandraisan'i yoru chatbot amin'ny mpitsidika dia fantatra amin'ny anarana hoe famolavolana resaka.
Torolàlana ho an'ny famolavolana resaka
izany infographic avy amin'ny Landbot, sehatra chatbot mifantoka amin'ny famolavolana resaka, mampiditra drafitra, faminaniana ary fanatanterahana paikady chatbot chatbot tsara.
Famolavolana resaka mampiditra fanoratana, famoronana feo sy feo, traikefan'ny mpampiasa (UX), famolavolana fihetsiketsehana, famolavolana fifandraisana ary famolavolana maso. Mamakivaky ireo andry telo amin'ny famolavolana resaka:
Fitsipika fiaraha-miasa - ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny chatbot sy ny mpitsidika dia ahafahana mampiasa fanambarana tsy mazava sy hitsin-dàlana hivoahana amin'ny resaka.
Miverena-Taking - Ny fandraisana ny fotoana ara-potoana eo amin'ny chatbot ary ny mpitsidika dia zava-dehibe amin'ny famahana ny tsy mazava sy ny fanaovana resaka mahomby.
teny manodidina - ny resaka dia manaja ny toe-batana, ara-tsaina ary ny toe-javatra misy ilay mpitsidika tafiditra.
Mba handaminana ny chatbot anao dia tsy maintsy:
Farito ny mpihaino anao
Farito ny anjara andraikitra sy ny karazana chatbot
Mamorona persona chatbot anao
Lazalazao ny anjara asany
Soraty ny script chatbot anao
Mba hanatanterahana resaka mahomby eo amin'ny bot sy ny mpitsidika dia misy singa mpampiasa interface ilaina - ao anatin'izany ny fiarahabana, fanontaniana, fanambarana fampahalalana, sosokevitra, fanekena, baiko, fanamafisana, fialantsiny, fanamarihana lahateny, lesoka, bokotra, singa audio sy sary.
Ity ny infographic feno… Ny torolàlana farany ho an'ny famolavolana resaka:
Landbot dia manana lahatsoratra amin'ny antsipiriany mahaliana amin'ny fomba ahafahanao mandrafitra sy mametraka ny chatbot ao amin'ny tranonkalany.
Vakio ny lahatsoratra feno an'i Landbot momba ny endrika famolavolana
Topimaso amin'ny horonantsary Landbot
Landbot manome alalana ny orinasa hamolavola traikefa amin'ny resaka singa UI manan-karena, mandeha ho azy ny mandeha ho azy automation, ary fampidirina amin'ny fotoana tena izy.
Ireo chatbots amin'ny tranokala dia Landbot's tanjaka, fa afaka manangana bot WhatsApp sy Facebook Messenger koa ny mpampiasa.
Andramo i Landbot anio
Fampahalalana: mpiara-miasa amiko i Landbot.
Tags: AffiliateBotchatbotfamolavolana chatbotchatbot fandrindranachatbot uiinterface interface an'ny chatbotteny manodidinaresakafamolavolana resakafitsipika fiaraha-miasafacebook messengerlandbot
Dingana 6 hahazoana ny fividianana mpanjifa Data Platform (CDP) amin'ny C-Suite anao